Kana ukashandisa Windows 10, hapana mubvunzo waona chirevo "Mhanya semaneja" pane imwe nguva. Asi zvinorevei? Heino chikonzero nei yakakosha, mashandiro ayo, uye nguva yekuishandisa.
Vatungamiriri Vane Yakazara Sisitimu Yekuwana
Kune maviri marudzi emaakaunzi mu Windows: Akaundi mushandisi maakaunzi uye Administrator mushandisi maakaundi. Administrator maakaunzi anogona kumisikidza marongero ehurongwa uye kuwana zvinowanzo ganhurirwa zvikamu zvehurongwa hwekushandisa. (Kune zvakare nhoroondo yakavanzwa inonzi "Administrator," asi chero account inogona kuve manejimendi.)
Chinangwa chebasa remutungamiriri ndechekubvumira shanduko kune zvimwe zvikamu zvehurongwa hwako hwekushandisa izvo zvingangodaro zvakuvara netsaona (kana kuburikidza nemaitiro akashata) neakajairika account yevashandisi.
Kana iwe uine yako PC uye isingatarisirwe nenzvimbo yako yebasa, pamwe uri kushandisa account yemurairi. (Unogona kutarisa chinzvimbo chako chemutungamiri nekutungamira kuZvirongwa> Maakaundi> Ruzivo Rwako. Uchaona "Administrator" pazasi pezita rako pano kana iwe uri maneja. Kana uine mamwe maakaundi akamisikidzwa pane yako Windows 10 PC, unogona kuenda kuZvirongwa> Maakaundi> Mhuri & vamwe vashandisi kuti vaone kana vari maneja.)
Asi kunyangwe iwe uri kushandisa Administrator account pa Windows, kwete chese chishandiso chinoda zvakakwana maneja mvumo. Muchokwadi, izvo zvakashata kune chengetedzo-yako webhu bhurawuza haifanire kuve nekwaniso yakakwana kune yako yese yekushandisa system Mushandisi Akaunti Kudzora (UAC) inogumira mvumo iyo mashandisiro ainayo, kunyangwe paunovhura ivo kubva kuacomputer account.
Paunoshandisa "Mhanya seMubati," UAC inobuda munzira, uye iko kunyorera kunoitwa nemuzere maneja kuwana kune zvese zviri pane yako system.
Saka kana iwe uchimhanyisa Anwendung semubati, zvinoreva kuti urikupa iyo app yakasarudzika mvumo yekuwana yakatemerwa zvikamu zvako Windows 10 system ingadai isingave-miganho. Izvi zvinounza njodzi dzinogona kuitika, asi zvakare dzimwe nguva zvinodikanwa kuti zvimwe zvirongwa zvishande nemazvo.
(Kana iwe uchida kuverenga zvimwe pamusoro pehunyanzvi maficha ekuti account yemubati inoshanda sei, iyi Stack Kufashukira tambo inobatsira zvikuru.)
RELATED: Gonesa iyo (Yakavanzika) Administrator Akaunti pa Windows 7, 8, kana 10
Ndinofanira Kumhanyisa Rini Mapurogiramu seMutungamiriri?
Kana chirongwa chisiri kushanda sezvaungatarisira, ungangoda kuchimhanyisa semubati uye uone kana izvozvo zvikagadzirisa dambudziko. Izvi zvinonyanya kuitika nezvirongwa zvekushandisa izvo zvingangoda kuwana kwakadzika kuti uite diagnostics pane yako faira sisitimu, kumisikidza zvigadzirwa zvekuchengetedza, kana kushandura marongero ezvimwe zvishandiso zvakaiswa mune yako system.
Ndeapi maApplication Anogona Kumhanya seMutungamiriri?
Mapurogiramu chete akarongerwa nhaka yeWin32 uye Win64 APIs inogona kumhanyisa semutungamiriri. Pachivanhu, zvinoreva kuti maapplication akagadzirwa Windows 7 uye pakutanga, asi mazhinji mazuva ano Windows maapplication achiri kuchengetedzwa nenzira iyoyo. UWP (Zvese Windows Platform) maapplication- senge izvo zvinotorwa kubva kuMicrosoft Store - haigone kumhanyisa semutungamiriri.
RELATED: Nei (Yakawanda) Desktop Mapurogiramu Isingawanikwe muiyo Windows chitoro
Ndomhanya Sei Mapurogiramu seMutungamiriri?
Kana iwe uchida kumhanya iyo Windows 10 app semubati, vhura iyo Start menyu uye tsvaga iyo app pane irwo runyorwa. Dzvanya-kurudyi icon yeapp, wobva wasarudza "Zvimwe" kubva kumenyu inoonekwa. Mune iyo "Zvimwe" menyu, sarudza "Mhanya semutungamiri."
Zvakare, kana iwe uchida kugara uchimhanyisa Anwendung semutungamiriri, gadzira ipfupi kune iyo app pane desktop yako kana taskbar, kana muFaira Explorer. Dzvanya-kurudyi kudimbudzira uye sarudza "Zvivakwa." Muwindo reZivakwa rinoonekwa, tinya pakanzi "Compatibility", ipapo isa mucherechedzo padivi "Mhanya chirongwa ichi semutungamiri."
Mushure meizvozvo, vhara iyo Properties hwindo. Zvino pese paunomhanyisa iyo app kubva kunzira ipfupi, unogara uchimhanya nayo neropafadzo dzemutungamiri.
Unogona zvakare mhanya chirongwa semubati kubva ku "Mhanya" bhokisi (yakawanikwa nekudzvanya Windows+ R) kana iwe ukadzvanya Ctrl + Shift + Enter paunenge uchiita iyo app. Rombo rakanaka!